INkantolo yase-Limpopo ibuyesele ithemba kubafundi bakamatikuletshi abangaphumelelanga | Scrolla Izindaba
INkantolo yase-Limpopo ibuyesele ithemba kubafundi bakamatikuletshi abangaphumelelanga
Abafundi ababalelwa kwabayi-137,000 ababhala izivivinyo zikamatikuletsheni ngonyaka odlule kodwa bafeyila, manje bazithola sebekhishwe ohlelweni lokufunda lwaseNingizimu Afrika.
Othishanhloko babo bathi bayazifaka izicelo zokuthi baphinde kwezinye izikole kodwa ziyabanqaba nazo.
Njengoba sekuphele iminyaka eyi-12 yokufunda, izinkulungwane zalaba bafundi zibhekene nempilo enzima yokungakwazi ukuthola umsebenzi ngaphandle kwesitifiketi sikamatikuletsheni.
Manje iNkantolo eNkulu yase-Limpopo isibuyise ithemba kubafundi abakulesi sikhundla ezweni lonke, ngemuva kokuba imindeni eyisithupha yethule isicelo esiphuthumayo esimelene nohulumeni ekupheleni kwesonto eledlule.
Lesi sinqumo esiyingqophamlando sithi akukho emthethweni ukuthi uMnyango wezeMfundo uvimbele abafundi abafeyile uMatikuletsheni ukuthi baphinde amakilasi abo.
Lesi sinqumo singavula amasango ezikhukhula ezweni lonke. Singaqeda nomkhuba omubi ophoqa abazali kanye nogogo nomkhulu abangenayo imali ukube bayeke ukukhokhela izikole ezizimele zokuqedela ukufunda.
UMalwandla Chauke, ofuna ukuphinda ikilasi ukuze afundele ubummeli, ungomunye wabafundi – abafaka izicelo kuleli cala.
Isikole sakhe, i-Shirilele Secondary School e-Mavambe e-Malamulele, besingeke simvumele abuyele esikoleni ngoba inqubomgomo yoMnyango Wezemfundo ayikuvumeli lokho.
Umyalelo wenkantolo manje uphoqa umnyango wezemfundo ukuthi uvumele iqembu labafundi ukuthi liphinde uMatikuletsheni njengabafundi ngokugcwele.
Ngemuva kwesinqumo, uMalwandla akakwazanga ukufihla injabulo yakhe.
“Ngifuna ukuyofundela ubummeli e-Tshwane University. Bese ngicabanga ukuthi ngizohlala ekhaya ngingenzi lutho nephupho lami lishabalale. Ngiyajabula ukuthi sibuyela esikoleni. Ngizofunda ngokukhulu ukuzimisela ngithole no-distinction ukuze iphupho lami lifezeke,” kusho uMalwandla.
Ummeli onqobe leli cala ngummeli wase-Limpopo uTerrance Maluleke wase-Mvundlela kanye ne-Associates Attorneys Inc.
UMaluleke uthe, wathintwa ngomunye wabazali, wase ethatha isinqumo sokwenza leli cala mahhala. Abazali beza ehhovisi lakhe mhla zi-5 kuNdasa, okwathi ngakusasa uMaluleke wayesesenkantolo.
“Ngibone ukuthi icala labo libalulekile futhi liyaphuthuma kanti ngoLwesihlanu sibe sesiya enkantolo. Lokhu sikwenze ngaphandle kokubakhokhisa ngoba sibona sengathi kudlalwa ngamalungelo abo.
“Ukunqoba kungaba nomthelela omkhulu njengoba abafundi abaningi ezweni lonke besesimweni esifanayo.”
Nakhu okwenzeka ngesikhathi abazali babafundi abavela e-Shirilele Secondary School bekhonjwa ngapha nangapha ngenkathi belwela imfundo yezingane zabo:
● Mhla zingama-23 kuNhlolanja: Kwakhishwa imiphumela kamatikuletsheni, uthishanhloko watshela abafundi abafuna ukuphinda ukuthi ngeke bamukelwe ekilasini lika-2021.
● Mhla zingama-26 kuNhlolanja: Abazali bahlangana nothishanhloko, uMnu Vukeya owabatshela mayelana nencwadi evela ehhovisi lesifunda evimba othishanhloko ekuvumeni abaphindayo esifundeni sase-Malamulele.
● Abazali baye kwisikhulu sesifunda lapho uMnu Nkuna ephike khona ukuthi kukhona incwadi evela kubo futhi wabatshela ukuthi uthishanhloko ubadukisile.
● Laba bazali bahamba bayofuna usizo kwikhansela lewadi uMabasa Dorris naku-SGB.
● Mhla zi-1 kuNdasa: Uthishanhloko uhlangane nekhansela lendawo kanye nabazali ngaphandle kwe-SGB emhlanganweni. Uthishanhloko wathembisa ukucabanga kabusha mayelana ngezinto.
● Mhla zi-3 kuNdasa: Abafundi batshelwe ukuthi babuyele esikoleni ngakusasa begqoke umfaniswano wesikole.
● Mhla zi-4 kuNdasa: Abafundi abavunyelwanga ukuya emakilasini kepha banikezwa amafomu okufaka izicelo zokubhala izivivinyo zama-supplements kodwa futhi bengabi ngabafundi ngokuphelele.
● Mhla zi-5 kuNdasa: Abazali baye kuMvundlela osebenza ku-Associates Attorneys Inc.
● Mhla zi-6 kuNdasa: Kulungiswa isicelo esiphuthumayo eNkantolo eNkulu yase-Thohoyandou.
● Mhla zi-7: INkantolo eNkulu iyalele uthishanhloko ukuthi abuyisele abafundi ezinsukwini ezizayo futhi imnikeze amahora angama-48 okubhalisa abafundi ekilasini likamatikuletsheni ngowe-2021.